राधीको आइपीओ बाँडफाँड आज, कस्को भागमा कती ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काठमाडौ । राधी विद्यूत कम्पनी लिमिटेडले पुस ३ गते देखि निष्कासन गरेको ७ करोड ६४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ६४ हजार ५ सय ५० कित्ता साधारण सेयर (आईपिओ) आज बाँडफांड हुने भएको छ ।
निष्काशन तथा बिक्रि प्रबन्धक नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेडका अनुसार बिहान ९ बजे बिक्रि प्रबन्धकको कार्यालय नारायणचौर नक्सालमा बाँडफांड हुने छ । सर्वसाधारणमा आइपीओ निष्काशन पश्चात कम्पनीको सेयर संरचना संस्थापक तर्फ ७५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित १० प्रतिशत र साधारण तर्फ १५ प्रतिशत रहेनछ।
कम्पनीले जारी गरेको आईपिओमा २ प्रतिशत अर्थात् १५ हजर २ सय ९१ कित्ता कमार्चारीको लागि र ५ प्रतिशत अर्थात् ३८ हजार २ सय २८ कित्ता सामुहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको थियो । बाँकि रहेको ७ लाख ११ हजार ३१ कित्ता शेयर सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको थियो ।
राधि बिद्युत कम्पनीले ४.४० मेगावाटको राधि सानो हाइड्रोपावर परियोजना संचालन गरिरहेको छ। यस परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गरेपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी ४१ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।